‘म कोरोनाभाइरस संक्रमित हुँ, जानीजानी अरुलाई पनि भाइरस सारिरहेकी छु’ हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)……. – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/‘म कोरोनाभाइरस संक्रमित हुँ, जानीजानी अरुलाई पनि भाइरस सारिरहेकी छु’ हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…….
‘म कोरोनाभाइरस संक्रमित हुँ, जानीजानी अरुलाई पनि भाइरस सारिरहेकी छु’ हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…….
848 Less thanaminute
१८ वर्षकी एक किशोरीले सामाजिक संजालमा भिडियो अपलोड गरेर आफू कोरोनाभाइरस संक्रमित भएको र अरुलाई पनि जानीजानी भाइरस सारिरहेको दावी गरेकी छिन् । यी किशोरी अमेरिकाको टेक्सस राज्यको क्यारोल्टन शहरकी भएको माई टेक्सास डेली ले जानेको छ भिडियो सार्वजनिक भएपछि पुलिसले यी किशोरीको खोजी गरिरहेको छ ।
सामाजिक संजालमा भिडियो भाइरल भएपछि स्थानीय पुलिसले ट्वीट गर्दै यसबारे जानकारी दिएको छ ।पुलिसका अनुसार यी किशोरीको पहिचान भइसकेको छ तर उनलाई पक्राउ गर्न बाँकी छ । पुलिसका अनुसार भिडियोमा आफू संक्रमित भएको र जानीजानी अरुलाइ संक्रमित गरिरहेको दावी गर्ने किशोरीको नाम लरेन माराडिआगा हो । लरेनमाथि आतंक फैलाएको अभियोगमा मुद्दा चलाइने पुलिसले जनाएको छ ।
पुलिसले आम मानिसहरुलाई लरेनबाट धेरै खतरा छ कि छैन भन्ने कुराको भने पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ किनकि लरेन सााच्चै संक्रमित हुन् वा त्यसै हल्ला फैलाएकी हुन् भन्ने खुलासा भइसकेको छैन । यद्यपि लरेनले यसरी धम्की’ दिएपछि भने कारवाही गम्भीर रुपमा अगाडि बढाइएको छ । पुलिसले लरेनको गिरफ्तारीको लागि आम नागरिकसँग अपिल गरेको छ । पुलिसले लरेनको बारेमा कुनै जानकारी भए आफूहरुसँग साझा गर्न आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।
भोली सुर्यग्रहण, आज १० बजेबाट नखानुहोस यी खानेकुरा